“Talooyinka Tite ayaa nagu hogaamisay inaan guul ka gaarno Mexico”…. Philippe Coutinho – Gool FM
“Talooyinka Tite ayaa nagu hogaamisay inaan guul ka gaarno Mexico”…. Philippe Coutinho
Dajiye July 2, 2018
(Russia) 02 Luulyo 2018. Laacibka reer Brazil Philippe Coutinho ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in xulkiisa Samba uu u gudbay wareega 8-da ee koobka aduunka 2018, kadib ,markii ay guul kaga gaareen Mexico 2-0.
Philippe Coutinho ayaa wareysi uu bixiyay kulanka kadib waxaa soo xigtay wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia.
“Waxaan ku jirnaa Koobka Aduunka waxa ugu muhimsan ayaa ah inaan guul gaarnay, waxaan ku guuleysanay inaan u gudubnay wareega 8-da ee koobka aduunka”.
“Brazil ma aysan wanaagsaneyn qeybtii hore ee ciyaarta, waxaan luminay xakameynta kubada, waxaa jiray isbedel dhanka qorshaha ciyaarta ku aadan”.
“Macalinka xulka qaranka Brazil Tite wuxuu naga codsanayay inaan dulqaad yeelano, sababtoo ah fursadaha ayaa imaan doona, waxaan waxaan filayaa inaan qaadanay qeybta labaad qaab ciyaareed aad u fiican, waxaana u qalanay inaan inaan maanta guuleysano”.
RASMI: Kooxda Inter Milan oo lasoo saxiixatay xidigaha Stefan de Vrij & Kwadwo Asamoah
Xulka qaranka Belgium oo si layaab leh ugu gudbay wareega xiga ee siddeeda kadib markii ay guul cajiib ah ka gaareen Japan